‘स्पेस वार’ : ट्रम्पको डलर कमाउने नयाँ धन्दा ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
‘स्पेस वार’ : ट्रम्पको डलर कमाउने नयाँ धन्दा ?
अमेरिका नयाँ युद्धभूमिको खोजीमा लामो समयदेखि लागिरहेको थियो । यसका पछाडि मूलतः तीनवटा कारणहरु रहेका छन् । पहिलो हो, अमेरिकी अर्थतन्त्र कसरी पार लगाउने ? दोस्रो हो, चीनको आर्थिक उन्नतिलाई कसरी धराशायी बनाउने र तेस्रो हो, विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादी हैकम र दम्भ कसरी कायमै राखिरहने ?
अमेरिकामा ट्रम्पको उदयभएपछि ‘स्पेस वार’ले हल्लाखल्ला र चर्चा पाएको छ । ट्रम्पका अनुसार यो काम हुनै पनि लागिसकेको छ । अमेरिकाले ढिलोचाँडो ‘स्पेस फोर्स’ गठन गरिसकिने बताएको पनि छ । उसले बताएको स्पेस फोर्स अन्तरिक्ष युद्ध लड्नका लागि हो ।
प्रयोग हुने साधन र प्रक्रियाका हिसाबले त्यो युद्ध या त ड्रोन पठाएर लडिने छ, या त रकेट प्रक्षेपणको विधिबाट । त्यस अतिरिक्त रोबोट निर्माण तथा परिचालन गरेर पनि लडिने छ । शायद यसमा अत्यधिक सौर्य उर्जाको संचय, त्यसको प्रयोग र परिचालनमा ध्यान दिइने छ । यो अति महङ्गो प्रविधिको युद्ध हुने छ ।
पृथ्वीमा शायद चीनको प्रभुत्व र चिनियाँ अर्थतन्त्रको विस्तार अरुले सोचेभन्दा कैयौं गुणा अगाडि गइसकेको छ । अहिले त कतिसम्म भएको छ भने चीन उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा उभिएको र अमेरिका संरक्षणवादी अर्थतन्त्रकोे पक्षमा धकेलिएको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । अमेरिकाले मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल उठाउने कुरा गर्ने र जी–७ तथा जी–२० जस्ता व्यापार साझेदारहरु आफ्नो पक्षमा नरहेको बताउने गर्नाले पनि अमेरिकाको यो पृथ्वीमा बिस्तारै वर्चस्व हट्दै गएको थाह पाउन सकिन्छ ।
अमेरिकाले भर्खरै स्वीकार गरेको छ कि ‘नेटो’ अब काम लाग्ने अवस्थामा छैन । यसको अर्थ हो अमेरिका र यसका साझेदारहरुको पहिलेको जस्तो बर्चस्व अब यो धरतीमा टेकेर मात्र रहने स्थिति छदैछैन । त्यसैले ट्रम्पले ‘नेटो’को ठाउँमा ‘स्पेस फोर्स’का कुरा गरेका छन् । उनले लड्ने निशानाका रुपमा रुस, चीन, इरान र उत्तर कोरियाले अन्तरिक्षमा राखेका भूउपग्रहहरुलाई बनाउने बताएका छन् ।
यति भएपछि एक त स्पेस वारका साझेदार देशहरुसँग ‘यति’ र ‘उति’ डलर ल्याउ भनेर ध्वाँस लगाउन पाइयो । यसले धराशायी अमेरिकी अर्थतन्त्र केही उठाउन सहयोग गर्ने भयो । दोस्रो कुरा अमेरिकी टेक्नोलोजी विक्री गर्न पाइने भयो । यसबाट ट्रम्प जस्ता धनकुवेरहरुले ट्रिलियन डलरमा मुनाफा कमाउन पाउने भए । बीसबीस वर्षसम्म डेमोक्य्राटका बाराक ओबामा र बिल क्लिन्टनहरुले अमेरिकामा राज गर्दा सुख्खाटाट परेका रिपब्लिकन ट्रम्प लगायतका धनकुवेरहरु गुमेका बीसौं वर्षका सावाँव्याज एकै पटक असुलउपर गर्न पाउने भए । अर्कोतिर युरोप लगायतका देशहरु चीन र रुसका विरुद्ध लड्नै पर्यो, सहभागी हुनै पर्यो । तिनीहरुको अन्यत्र जाने ठाउँ पनि छैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ‘स्पेस वार’ निकै महंगो लडाइँ हो । त्यो लडाइँ लड््न पाए चीन, रुस, इरान, ब्राजिल तथा अन्य देशहरुलाई कङ्गाल बनाउन पाइने भयो । त्यसपछि पृथ्वीमा अमेरिकाकै दमदमी चलिरहन्छ भन्ने सोचमा ट्रम्प पुगेको देखिन्छ । यसका साथै स्पेस वार गरिने नै भइयो भने त युरोप लगायतका पुँजीवादी मुलुकहरुले रिसले बङ्गारा चपाउँदै भएपनि अमेरिकालाई नै नेता नमानेर जाने वातावरण सिर्जना हुने भयो ।
‘स्पेस वार’ मूलतः यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि अमेरिकाले नार्न गइरहेको देखिन्छ ।